Ngenisa imifanekiso kunye nemodeli ye-3D kuMhlaba kaGoogle -Geofumadas
Ikhaya/Google umhlaba / imephu/Ngenisa imifanekiso ye-3D kunye nomzekelo ukusuka kwiGoogle Earth
Google umhlaba / imephuMicrostation-BentleyTopography
I-Microstation, ukusuka kuguqulelo 8.9 (XM) izisa uthotho lwemisebenzi yokunxibelelana neGoogle Earth. Kule meko ndifuna ukubhekisa ekungeniseni imodeli enamacala amathathu kunye nomfanekiso wawo, into efana naleyo iyenzayo AutoCAD Civil 3D.
Le mi sebenzi isebenze ngu:
okanye xa kwenzeka i-Microstation isesipanishi, ekusebenziseni iindleko ukulungelelanisa:
Oku kukusebenza kwalo naliphi na iqonga elisebenza kwiMicrostation, enje ngePowerCivil, iMephu yeBentley, iBentley Coax, njl. Iimpawu ze-XNUMX ne-XNUMX ziyasebenza, enye iyavumelanisa umbono weGoogle Earth ngokusekwe kule sinayo kwiMicrostation kunye nenye yokwenza umva. I icon yesine kukuzisa umfanekiso kaGoogle kwimephu.
1 I fayile ye dgn
Ukuqala, lo msebenzi udinga ukuba ifayile ye-dgn ibe yi-3D, xa sinefayile eyakhiwe nge-2D imbewu, kufuneka yenzeni:
Ifayile> ukuthumela ngaphandle> i-3D
Emva koko sivula ifayile esiyithumele ngaphandle. Enye into ekufuneka ibe nayo yinkqubo yesalathiso sendawo. Oku kutshintshe kancinci emva kweMicrostation 8.5, kodwa ngokubanzi iyayamkela inkqubo eyabelweyo kunye nezo nguqulelo nangona ngamanye amaxesha ikhankanya nje ukuba inkqubo ye-UTM kodwa ayichazi indawo. Kwimeko apho ungenayo, kuyenziwa kusetyenziswa i-icon yokuqala yebar endiyibonisileyo ekuqaleni kweposti kunye nokukhetha inkqubo enomdla kuthi kwithala leencwadi. Kule meko kufuneka sabele inkqubo eqikelelweyo (i-northing, easting ...) kwaye sikhetha ukhetho lwe-World (UTM) nge-WGS84 datum, njengenkqubo esetyenziswa nguGoogle Earth.
Ukuze ungabi nzima kunzima, unokwabela inkqubo kwiintandokazi kwaye ngoko akufanele ufune yonke into esiyifunayo.
Kwimeko yeGoogle Earth, kulula ukufihla ikhampasi, ibha yomgangatho, igridi okanye nayiphi na into engenamdla kuthi. Kuyenzeka ukuba ukhethe ukhetho lwe imifanekiso yembali Ivela kuGoogle Earth 5, ukucima ukugubungela iminyaka esingenamdla kuyo, amaxesha amaninzi ezona zamva nje azibonakali kangako. Xa sele silungile, kufuneka sikhethe indawo yomdla, kwaye sihambelane phakathi kweGoogle Earth neMicrostation.
Kukho ipaneli esisibonelela ngolungelelwaniso oluthile, kodwa xa zisenziwa aziloncedo njengoko inkqubo yokujonga ethe nkqo esetyenziswe yiGoogle Earth yenziwe lula, ngaphandle kwezinye iindawo eUnited States nasePuerto Rico. Ke ayinangqondo ukukhetha ukuphambuka kobude; Yintoni ebalulekileyo apha kukuchaza ukuba ngaba kunokusetyenziswa umnatha onxantathu okanye iigridi; Ukhetho "jonga umhlaba" kufuneka uhlale usebenza.
2 Ngenisa umfanekiso
Ukungenisa umfanekiso kufuneka ukhethe iqhosha lesine kwibar kwaye ucofe kwiscreen. Ngenxa yoko siya kufumana inqaku elibhaliweyo.
Ukuze sibone umfanekiso, senza: Izixhobo> nikela> Jonga, kwaye ngolu hlobo sifumana iphaneli apho sagqiba kweminye imiqulatho yohlobo lokunikezela, ukubonakala komgca nokukhanya komfanekiso.
Ukubona imodeli kwi-isometric, siyenza ngesixhobo esikwiJonga, kwaye sibeka kakuhle isometric siyijikelezisa ngokukhululekileyo. Bona ukuba kunokwenzeka ukubonelela ngendawo ebiyelweyo kuphela nge ucingo okanye indawo esekwe kwinto. Kwaye ukuba sikhetha ukhetho Stereo, sinokubona umsebenzi ngeelensi ze-stereoscopic -abo bayakhohlwa ukubuya xa beshiya i-cinema-. Iphaneli endiyibonisayo apha ngezantsi yahlukile kancinci ngokwesicelo, kuba kule meko ndiyisebenzisayo PowerCivil eneminye inketho yokunikezela.
Umfanekiso ufika kumlinganiselo wegrey kwaye umgangatho awukho nto emfutshane ngenxa yokuba iphela shi cilela; iphucula xa usebenzisa uguqulelo lukaGoogle Pro kunye nokugcina uMhlaba kuGoogle kwimowudi yeDirectX. Kwimeko yemodeli yedijithali, ayinakuphuculwa ngaphezulu kokunikwa nguGoogle, nangona kunjalo oku kubonakala kuyindlela ebonakalayo yokuphumeza umsebenzi oncedisayo kunye Iziqu, apho unokukhuphela khona umfanekiso ophezulu wephepha kunye ngolu hlobo unako ukulandelelana.
Nangona ukubonisa oko kuthatha ukunikezela ngenxa yokuba imodeli yedijithali kungekhona umfanekiso, ngalunye ixesha utshintsho lusetyenziswa ekunikezeni, umfanekiso uveliswa kwirejista efanayo, okungalayishwa ngokwahlukileyo nomphathi we-raster.
Ukucacisa amathandabuzo ambalwa: Izakhiwo ze3D aziziswanga, njengoko ezi zingeyonxalenye yemodeli yedijithali kwaye ukuchaneka kwemodeli kunokuphuculwa ngokwenza izinto ezincinci. Thatha umzekelo weSan Sebastián, apho umgangatho wolwazi ulungile; Ngasekunene kukho umpu ofanayo othathwe kumanqanaba ohlukeneyo okusondeza.
Okwangoku, PlexEarth I-Merit ithathwa njengesixhobo esinokubambisana kakhulu phakathi kweGoogle Earth kunye ne-CAD platform.
Ukuze ucele inguqu yokuhlola, qha ga mshelana Yesu.Zenteno@bentley.com ngubani ummeli weCentral America kunye neMexico.
Kukho kwiwebhusayithi kukho i-imeyile yokunxibelelana.
Ndifuna INkqubo ye-URGENT apho ndibhalisayo kwaye ndiyikhuphela
Kakade, ayikho inkululeko.
Ukuba ubhalisa kwi-SELECT service kuya kwenzeka ukuba ucele inguqulo yesilingo, ukuba iprofayili yakho isebenza.
Ndingayilanda phi le sixhobo ukuba ndiyisebenzise kwiGoogleEart yam
Umfanekiso weSpeyinti kwi desktop yakho ... ngexesha langempela